पालुङ स्वास्थ्य केन्द्र तोडफोड, डाक्टर फर्केपछि बिरामीको बिचल्ली | Kendrabindu Nepal Online News
३० भाद्र २०७६, सोमबार १५:१८
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालुङमा चिकित्सक नहुँदा अहिले बिरामीको बिचल्ली भएको छ । उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र पुग्ने दैनिक एक सयभन्दा बढी विरामी बिचल्लीमा परेका हुन् ।
गत शनिबार एक अराजक समूहले स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेर डाक्टर रविन थामी र अहेव आशा भण्डारीमाथि दुर्व्यबहार गरेपछि उनीहरू सेवाबाट फिर्ता भएका हुन् । चिकित्सकहरूले सुरक्षाको कारण देखाई स्वास्थ्य केन्द्र छोडेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपकसिंह लामाले जानकारी दिए । थाहा नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष समेत रहेका लामा चिकित्सक नहुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले तत्काल समस्या समाधानका लागि थाहा नगरपालिकासँग आग्रह गरेका छौं ।’
थाहा नगरपालिकाका प्रमुख लवशेर विष्टले डाक्टर ल्याउने पहल भइरहेको जानकारी दिए । विष्टले डाक्टर नहुँदा जीवन बिमा, बिरामी रिफर, पोष्टमार्टम, औषधि सिफारिसलगायतका कामहरू प्रभावित भएको बताए । नगर प्रमुख विष्टले दुर्घटनावश उक्त घटना हुन पुगेकाले अबदेखि सचेत रहने प्रतिवद्धता जनाए । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लामाले अराजक समूहले तोडफोड गरेको झ्याल मर्मत भइसकेको जानकारी दिए । व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष राजेश स्याङतानले जतिसक्दो चाँडो चिकित्सक ल्याएर सेवा सुचारु सञ्चालन गर्ने बताए ।
स्मरण होस्, यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शैयाको अस्पताल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा एक जना डाक्टरसहित १२ जनाको दरवन्दी रहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा बज्रवाराही, टिष्टुङ, दामन, चित्लाङ, कुलेखानी, आग्रालगायतका ठाउँहरूबाट बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्छन् । त्रिभुवन राजमार्ग नजिकै रहेकाले सवारी दुर्घटनामा परेका घाइतेहरुको पनि उपचार हुँदै आएको छ ।
घटना गत शनिवार बिहान करिब साढे १० बजेको हो । सार्वजनिक विदाको दिन भएकाले डाक्टर थामी र अहेव भण्डारी क्वाटरमा खानपिन र सरसफाइमा व्यस्त थिए । त्यही बेला स्थानीय बिनिशा विष्ट घाउको ड्रेसिङ गर्न स्वास्थ्य केन्द्र पुगेकी थिइन् । स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नभएपछि उनले डाक्टर र अहेवलाई फोन गरिन् । डाक्टर थामीले ड्रेसिङ इमरजेन्सी केस नभएकाले खाना खाएर १० मिनेटपछि आउने बताए । त्यो कुरा फैलिएपछि त्यहाँ तुरुन्तै भीड जम्मा भयो ।
आक्रोशित भीडले स्वास्थ्य केन्द्रको झ्याल ढोका र अन्य सामग्री तोडफोड गर्न थाल्यो । १० मिनेट नबित्दै आइपुगेका डा. थामी र अहेव भण्डारीमाथि समेत दुर्व्यवहार गरियो । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र परिसरमा जुत्ताको माला समेत फेला परेको थियो । घटनालगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले स्थानीय संग्रामजित विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो ।
palung health center
Prevकुन सर्तमा छुटे ज्ञानेन्द्र शाही ?
बाबुरामले संविधान दिवसमा न दिपावली गर्ने न त कालो दिवस मनाउनेNext